11 Novemba - 24 Novemba 2016
Novemba - 24 Novemba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
Izindaba: Ikhasi 7 Izindaba: Ikhasi 3
UBOSHIWE OBEDAYISA IMISEBENZI
NONDUDUZO NGCONGO UMASIPALA weTheku usubeke eceleni imali elinganiselwa kuR100 million ezosetshenziselwa ukwakha izimboni eduze nabantu ukuze uqinisekise ukuzibophezela kwawo ekuvuseleleni amalokishi kanye nokuthuthukisa abantu abamnyama kwezomnotho. Lokhu kuvezwe iMeya yeThekwu uZandile Gumede kwingqungquthela yamabhizinisi yezinsuku ezimbili ebiseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre phakathi komhlaka 8 nomhlaka 9 Novemba ngaphansi kwe- Essence Festival ezothatha isonto lonke. Ukwakhiwa kwezimboni zabamnyama kanye nokuthuthukiswa komnotho ngezinye zezihloko obekukhulunywa ngazo kule ngqungquthela ebibanjelwe ngaphansi kwesiqubulo esithi ?Radical Economic Transformation Agenda? ebihanjelwe yizikhulu zikahulumeni kanye nosomabhizinisi abavela kuleli naphesheya kwezilwandle. Ekhuluma nezihambeli ebezithamele le ngqungquthela, uGumede obeyingxenye yethimba elifaka phakathi noNgqongqoshe
UMASIPALA WETHULE IMOTO YOSIZO
VUYO NDLOVU IMEYA yeTheku uZandile Gumede isizibophezele ekusebenzisaneni nazo zonke izinhlaka zomphakathi ukubeka phambili izinhlelo eziqondene nokulwa nesifo sengculazi, esofuba (TB) kanye nezinye izihlava zomphakathi. UGumede umemezele lokhu ngenkathi kunomhlangano woMkhandlu weNgculazi obungomhlaka 8 Novemba eCity Hall, eThekwini. Lona bekungumhlangano wokuqala kwemine yoMkhandlu weNgculazi abewuhambele uGumede selokhu athatha izintambo zokuba yiMeya yeTheku. Lo mhlangano ubuthanyelwe izinhlaka ezahlukene zikahulumeni, uMasipala kanye nezinhlangano zomphakathi. Bonke abebehambele lo mhlangano bavumelene ngokuthi kusekuningi okusamele kwenziwe ukulwa nengculazi kanye nezinye izihlava zomphakathi. ?Lolu hlelo ngifisa ukulubeka phambilini ezinhlelweni zikaMasipala futhi ngizoqinisekisa ukuthi sithula izinhlaka ezifanele kuMasipala, izinhlaka ezifana neKomidi leNgculazi emaWadini kanye nesiGungu sokuPhepha koMphakathi ezizosebenza kuzona zonke izindawo zikaMasipala,? kusho uGumede. UGumede uphinde wacela abasebenzi bakaMasipala ukuba baqinisekise ukuthi babeka imali eyanele yezinhlelo okuhloswe ngazo ukulwa nengculazi. IPhini leNhloko yoMnyango wezeMpilo kuMasipala, uDkt uNoluthando Ngomane wethule umbiko wezinhlelo zeTheku ekulweni nengculazi nezihlava zomphakathi. Lo mbiko ngowekota yesibili yonyaka. Uthe kule kota abantu abangu-225 554 bahlolelwe igciwane lesandulela ngculazi kanti u-88.7 phesenti wabo utholakale ungenalo igciwane. Izibalo zikhomba ukuthi sekukhishwe amakhondomu abalelwa ku-12 453 570 ezindaweni ezifana namarenki amatekisi, izinxanxathela zezitolo, izindawo zobumnandi, imitholampilo kanye nezinye izikhungo. Abantu ababalelwa ku-352 957 badla imishanguzo yegciwane lengculazi. UNgomane uthe into ekhathaza kakhulu ukubona ukuhlukunyezwa kwabantu ngokocansi kwanda, ukukhulelwa kwabantwana abasebancane kanye nokushona kwezingane ezincane. USiyabonga Nzimande, onguSihlalo weNhlangano yoMphakathi uthe zonke izinhlaka zomphakathi zineqhaza okumele zilibambe ekulweni nengculazi nezihlava zomphakathi. Wengeze ngokuthi banezinhlelo ezahlukene asebeziqalile ekulweni nengculazi nezinye izihlava zomphakathi. Lezi zinhlelo zibandakanya izinhlelo zokulwa nezidakamizwa eziqalwe ezikhungweni zemfundo ephakeme, ukusingathwa kwe HIV/ AIDS Research Indaba esingethwe yiNyuvesi yaKwaZulu-Natali. vuyo.ndlovu@durban.gov.za
IMeya izolwa nengculazi kanye nezihlava zomphakathi
wezokuThuthukiswa koMnotho, ukuVakasha nezeMvelo, uSihle Zikalala, uthe: ?Sifisa ukweseka amabhizinisi abantu abamnyama ukuze siqinisekise ukuthi bayakwazi ukungena ezimakethe, bathola amathuba okuthuthukiswa kwamakhono futhi bakwazi ukwenza ngcono indlela abakhiqiza ngayo ukuze nempahla abayikhiqizayo ibe sezingeni eliphezulu.? UGumede uthe kusukela manje bazoqinisekisa ukuthi izinhlelo zabo ezinkulu ezifana no Go!Durban zihlomulisa abantu bakuleli. ?Lokhu kuzovulela amabhizinisi abantu abamnyama amathuba kukhulise nolwazi lwabo.? UGumede wengeze ngokuthi uMasipala ubeke imali enguR750 million ukuze uthuthukise amakhono ashodayo emkhakheni we-artisan okuyimali ezosebenza iminyaka emithathu ekuletheni uguquko kwezomnotho. Kanti uZikalala naye uhambe emazwini kaGumede. ?Singuhulumeni wasekhaya sibona sengathi izinhlelo zikaMasipala zokuthuthukisa umnotho zishaya emhloleni uma sikhuluma ngokuthuthukiswa kwamabantu abamnyama, abantu besifazane kanye nentsha.? UZikalala ucele Cllr Zandile Gumede IMeya yeTheku UMasipala ubeke eceleni imali enguR100 million yokwakha izimboni zabamnyama, iMeya uZandile Gumede imemezele engqungqutheleni ye-Essence Festival Durban. UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ukuVakasha nezeMvelo uSihle Zikalala ubengelinye lamalungu ethimba ebelihambele le ngqungquthela. osomabhizinisi ukuba basebenzise leli thuba lemali ekhishwe nguhulumeni enguR1 billion ezosiza ukweseka izimboni zabamnyama ezingaphezu kuka-100. Wengeze ngokuthi le mali kulindeleke ukuthi ihehe utshalomali olulinganiselwa phakathi kukaR10 billion noR20 billion oluvela kwezinye izindawo. ?Yisona sisombululo esinaso lesi uma sifuna ukuletha uguquko kwezomnotho, ukudala amathuba omsebenzi, ukuthuthukisa amakhono kanye nokuqeda ububha kuleli,? kusho uZikalala. Kanti omunye okhulume nezihambeli zale ngqungquthela wuJimmy Manyi ongumsunguli weDecolonisation Foundation ucele ukuba kube nokusebenzisana phakathi kukahulumeni kanye nabezimboni zabamnyama ukuze uhulumeni ezokwazi ukufeza izinjongo zakhe zokuletha uguquko kwezomnotho. Ithimba elivela e-United States of America lethule izindlela zokusimamisa umnotho kanye nokwabiwa komcebo. Leli thimba liphinde lakhombisa intshisekelo yalo yokusebenzisana nosomabhizinisi bakuleli. nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za
UMASIPALA WETHEKU UBUNGAZA
ISONTO LOKUQWASHISA NGOKUKHWABANISA